Indlwana entsha e-Visconde de Maua - I-Airbnb
Indlwana entsha e-Visconde de Maua
Itatiaia, Rio de Janeiro, i-Brazil
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Victor
U-Victor Ungumbungazi ovelele
Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni yinyanga entsha iyindawo yokunethezeka ehlanganisa umklamo wayo wesimanje nozobuchwepheshe kanye nesimo esiluhlaza sezintaba zase-Mantiqueira.
Iseduze nesikhungo sokudla ne-Vila Mauá.
Inomhlaba wangasese, futhi ngenxa yendawo ekuyo ihlanganisa ukuthula kwemvelo nokusondelana kwezimpawu zesifunda.
Sise kwenye yezindawo ezinhle kakhulu e-Viscount Maua.
I-chalet inokubhucungwa komzimba, isistimu yomsindo ye-Jcl, iphrojekthi yokukhanyisa, i-cable TV, i-Wi-Fi Internet, umshini wokwenza ikhofi we-capsule, i-microwave, i-toaster, phakathi kwezinye izinto zasendlini ezenza ukuhlala kube ntofontofo.
Indlu yokugezela iklanyelwe ukuhlela ukubuka i-mantiqueira saw, izici zokubhucungwa umzimba, i-shower yokucindezeleka okuphakeme, ubhavu oqoshiwe we-granite onetephu efudumele, umklamo we-luminotechnical onama-minds, futhi ulandela imikhuba yesimanje yokuhlobisa indlu yokugezela
I-chalet yakhelwe ngokuphelele ama-chardwoods, njenge-Peroba, i-Ipê, i- Angelim ne-Cedar. Wonke umsebenzi wokudweba wenziwa ngabachwepheshile kanye nezingcweti zendawo.
I-Wifi – 47 Mbps
I-HDTV engu-32" ene- ikhebula ye-premium, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.97 · 159 okushiwo abanye
Indlwana isendaweni yayo, inobumfihlo nokuzola okuphelele, ingene shi emvelweni futhi ibukeka kahle, eduze kwendlwana (ukuhamba amakhilomitha angu-1) siyakwazi ukufinyelela e-Rio enendawo yokubhukuda yemvelo, kanye nokuhambahamba kwezemvelo.
Ngizotholakala njalo ngefoni ne-app yokuthumela imiyalezo.
Ngemva kokuba ukubhukha kuqinisekisiwe, ngidlulisa wonke amareferensi, amacebiso namabalazwe ukuze nginikeze ukuhlala okungcono kakhulu.
UVictor Ungumbungazi ovelele